Banyere Anyị - Ningbo ZODI Auto mapụtara Parts Co., Ltd.
Ningbo ZODI Auto mapụtara Parts Co., Ltd. bụ ọkachamara auto akụkụ ozu ahia afọ 10, nke dị na Beilun district, Ningbo, China.The isi ngwaahịa na-agụnye breeki usoro, Suspension usoro, n'iru usoro, Jụrụ usoro, Stater usoro, Turocharger usoro, Engine akụkụ, Isi akụkụ, mgbanye usoro , Sensọ eletriki eletriki wdg na akụkụ akpaaka anyị dabara adaba maka
Gbọ ala: Toyota, Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Chevrolet, Daewoo, Kia, Isuzu, Mazada na Ford;
Gwongworo gwongworo: Mercedes-Benz, Scania, Volvo, Iveco, Renault, DAF, Nwoke, Daihatsu wdg.
Anyị ahịa bụ Middle East, Africa, South America na anyị ka na-agbalị na-emeghe Europe na North America.The ọkachamara na-arụsi ọrụ ike otu gụnyere ịzụta ngalaba, ahịa ngalaba, technology ngalaba na ajụjụ ngalaba ga-enye gị "Onye-Kwụsị Service" maka nkwado anyị.
Ihe dị ka 100 ihe ọhụrụ ngwaahịa na-mepụtara kwa afọ dị ka ndị ahịa anyị si samples, ogologo oge imekọ ihe ọnụ enyi na-eme ka ndị ahịa kwere anyị na-akpali anyị growth.Because ZODI nwere ike na-enye ihe kasị mma ọkachamara ọrụ na elu arụmọrụ feedback.Also anyị ga-atụle ndị ahịa anyị 'uru na ahịa ha ma kwe nkwa nkwekọrịta nkwekọrịta naanị.
Ogo bụ ndụ nke ụlọ ọrụ, afọ ojuju sitere na ndị ahịa bụ nchụso enweghị nlebara anya na-achụso usoro nlezianya dị mma na nlezianya nyocha na usoro ọ bụla zuru oke dịka ngwaahịa ọkọlọtọ mba na-enweghị ntụpọ.
Na anyị bara ọgaranya ahụmahụ, ISO 9001 àgwà usoro, elu àgwà ngwaahịa, asọmpi ahịa, elu ọrụ na na-oge nnyefe, anyị ji n'aka na anyị nwere ike izute niile nke gị chọrọ na gafere gị na-atụ anya.Our ga-eme n'ọdịnihu na-egbuke egbuke na ọhụrụ ekwenye mmekọrịta companieslọ ọrụ si n'akụkụ ụwa niile. Anyị na-atụ anya ịgwa gị okwu ka gị na gị kparịta maka etu anyị nwere ike isi jeere gị ozi.
ZODI na-agbaso "amamihe" azụmahịa mmadụ. Ọ na-ekwusi ike na ị ga-eji ezigbo ụlọ ọrụ mara mma na -emepụta Europe na North America. onyinye, na-enye usoro ikpo okwu ka mma iji kwalite onyinye na itinye ihe ezi uche dị na ya iji kwalite ikike, ka ndị ọrụ ọ bụla wee nwee ọganiihu. N'ọdịnihu, Ningbo ZODI Auto mapụtara Parts Co., Ltd. ga-eji ndị ịnụ ọkụ n'obi na-echebara ndị ahịa anyị echiche zuru oke, na-echebara ọrụ na njirimara ngwaahịa kwesịrị ekwesị, ka ha wee nwee ike ịkwalite ndị otu niile ka ha nwee ọganiihu ma nwee ọganiihu ma mechaa nye onyinye maka mmata nke ndị a ma ama International Automotive Market nke a na-akpọ dị ka "Mere na China".